Skål dia manome vola ho an'i Walter Kenneth "Ken" Whitty
Home » Lahatsoratra farany farany » People » Skål dia manome vola ho an'i Walter Kenneth "Ken" Whitty
Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao • People • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Vaovao isan-karazany
Amin'ny alahelo fatratra no nambara ny fandalovan'ny Skålleague Ken Whitty, MD, Flow Inter Co. Ltd., mpizara ny Paulaner Beer sy zava-pisotro.
Walter Kenneth "Ken" Whitty, 1952 - 2021, dia nandalo taorian'ny niaretany tamin'ny homamiadana.
Ny orinasan'i Ken dia mpanohana hatry ny ela an'i Skål any Bangkok sy Pattaya, Thailand.
Ny filohan'ny Skål International, Andrew J. Wood, dia nanao eulogy nandritra ny lanonana famonoana bodista natao omaly tao Wat Sri-Iam, Bangkok.
Tamin'ny faha-69 taonany dia niady tamin'ny homamiadana i Ken tato anatin'ny taona vitsivitsy. Teraka tany Waterford, Irlandy, Ken dia tonga voalohany tany Thailand tamin'ny taona 1999 ary nanangana haingana ny Danmark Co. Ltd. sy ny Flow Inter Co. Ltd., ny mpizara irery ao Thailand misy marika malaza toa ny Paulaner, Hopf, Hacker-Pschorr, ary ny Fullers Beers . Miaraka amin'ny Cornish Orchard Cider sy Abbona Wines. Ken dia MD ary Khun Kanpitcha (Toi), ary ny vadin'i Ken dia Tale Mpanatanteraka. Nanangana orinasa mahomby izy ireo amin'ny fanafarana labiera sy zava-pisotro malaza. Ilay orinasa manana ny mpanohana matanjaka azy dia nanjary mitovy dika amin'ny OKTOBERFEST eto Thailand.
Flow Inter Co. Ltd. dia mpanohana maharitra an'i Skål any Bangkok ary Pattaya, manohana tsy tapaka ireo mpikambana sy fivoriana mandritra ny 14 taona miaraka amin'ny Paulaner Beers ary zava-pisotro maro isan-karazany.
Andrew J. Wood, Filohan'ny Skål International, nandritra ny lanonana famonoana bodista natao omaly tao Wat Sri-Iam, Bangkok, dia nanao eulogy fohy. “Tamin'ny tsikitsiky mafana avy tamina sakaiza, dia mpanatrika tsy tapaka i Ken tamin'ny hetsika ara-indostrialy maro izay notohanan'ny orinasany sy notohanany. Na ny Chambre Commerce Thai Thai (BCCT) na ny Chambre Alemanina (GTCC) sy ny hafa, na ny hetsika indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany - toa an'i Skål na FBAT - Ken, Toi, ary ny ekipa dia nanohana be, "hoy i Wood.
“Nandao lova lehibe i Ken ary manatona an'i Toi sy ny fianakaviana am-pitiavana sy fanohanana isika amin'izao fotoana izao. Tena ankafizin'i Ken ary halahelo antsika rehetra izay nanohina ny fiainany. Amin'ny fo mavesatra sy alahelo be no alahelo ny fahafatesan'ny namantsika. ”
Skål dia fikambanana matihanina mpitarika ny fizahan-tany manerantany izay mampiroborobo ny fizahan-tany sy ny fisakaizana manerantany. Io no vondrona iraisampirenena mampiray ny sampana rehetra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Ireo mpikambana ao aminy, ireo mpitantana sy mpanatanteraka ao amin'ny indostria, dia mivory amin'ny sehatra eo an-toerana, nasionaly, isam-paritra ary iraisampirenena mba hifanakalo hevitra sy hikatsaka lohahevitra mahaliana ny rehetra.